Some Advice For MZ — MYSTERY ZILLION
Some Advice For MZ
အက်ဒမင်တို မော်မော်တိုရေ။ ကျွန်တော် ကြေညာချက်များ > MZသတင်း အောက်မှာ thread အသစ်ဖွင့်လိုမရပါဘူး။ သူများတွေ တော့ဖွင့်နေတာ ကိုတွေ့နေရပါတယ်။ ဖွင့်ရင် ကျွန်တော့မှာ Permission မရှိဘူးလိုပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာ တခုက အခုဖိုရမ်မှာ Thread တွေ၊ Post တွေ အကုန် ပြန့်ကြဲနေပါတယ်။ စဝင်တဲ့လူတွေ ဘယ်ဟာကို ဘယ်လို ရှာရမယ် ဆိုတာ တော်တော် ဒုတ်ခ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အက်ဒမင်များ အနေနဲ့ စီစစ်ဖို လိုပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို ခုခွဲထားတဲ့ Category တွေထက်ပိုမို ရှင်းလင်းပြီး User Friendly ဖြစ်မဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ ပြန်ပြောင်းဖို လိုအပ်တယ်လိုထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တိုဟာ Technical သီးသန့်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဥပမာ
အဲ့ဒိ ဆိုက်တွေကို နမူနာ အဖြစ်ယူသင့်ပါတယ်။ အသစ်တွေမှမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တောင် New Post ကနေပျောက်သွားတဲ့ Post တခုကို ပြန်ရှာဖို အချိန်တော်တော်များများပေးရပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ Post တွေကို ပြန်ရွေးထုတ်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတခုမဟုတ်ဘူးလို ယူဆပါတယ်။ ဒီနေ့ဟာ ကျွန်တော့မွေးနေ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် MZ အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ Post လေးတခုတင်ချင်တာနဲ့ ဒီ Post လေးကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ အားလုံး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပေါ့။
ကောင်းပါတယ် အကြံ ပြုချက်အတွက် အဲဒီ Thread အတွက် က အက်ဒမင် တို့ မော်မော် တို့ပဲ ရတယ် ပြီးတော့
ပြန်စီဖို့က မော်မော်တို့ လည်း လုပ်နေပါတယ် သူတို့အားရင်ပြန်ပြန်စီနေတာတော့တွေ့တယ် တူနေတဲ့ပိုစ့်လေးတွေလေ
အန် ဟုတ်ဘူးလေဗျ။ skyblue.ster တောင်ဖွင့်ထားသေးတယ်လေ။ ဒီမှာ လေ။ :106:
ကိုတက်လူ ပြောလို့ ကျနော်အခုစမ်းကြည့်တာ မရဘူး။ နောက်ပိုင်းမှပိတ်လိုက်တာထင်တယ်
Oops. I see. I got it. I was wrong. These post were moved by mod & admin like u r post moved by Ko Nya Mee Eain.
ကျနော် အကြိုက်ဆုံး နေရာတွေခွဲထားတဲ့ ပုံကလဲတော်တော်လေးမိုက်တယ် ပုံတွေထဲ့လဲမိုက်တယ် ပြီးတော် ပို့ reply အတွက်လဲတော်တော်လေးကောင်းတယ် နည်းပညာပိုင်းဆို လဲသက်သက်ခွဲထားပေးတယ် မျက်စိလဲသိပ်မရုူတ်ဘူး ရှာရတာလဲလွယ် တယ်
ရှာတာခေါင်းက မူးပဲမူးသွားမယ် ရှာလို့တော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး:d
ကြေညာချက်များ > MZသတင်း အောက်က thread ကို ပိတ်ထားလား မပိတ်ထားလား ကျွန်တော်လဲမသိဘူးဗျ။ အဲဒါတွေက မင်မင်တွေပဲလုပ်လို့ရတာ မော်မော်တွေလုပ်လို့မရဘူး (ထင်တာပဲ) ဂျစ်ပစီလေးရဲ့ thread ကိုတော့ ကျွန်တော်ရွှေ့ထားတာပါ။ skyblue.ster ရဲ့ thread ကိုတော့ ကျွန်တော်ရွှေ့ထားတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ အရင်တုန်းက ဖွင့်ပြီးအခုမှပိတ်တာလား ကိုတော့ မင်မင်တွေကိုမေးကြည့်မှ သိလိမ့်မယ်ဗျ။
အထက်က ပြောတော့ အောက်က စာမတင်သေးလို့တဲ့။ အောက်ကပြောတော့ အထက်က စာမကျသေးလို့တဲ့။ အထက်နဲ့အောက်နဲ့ကြားမှာ ဇော်ကန့်လန့်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဒီဓါတ်တွေ ဖိုရမ်ကိုပါကူးလာပြီး။ ဒီဓါတ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ ပြည်မကြီးက အကြောင်းကို ပြောတာနော်။ ကျနော်ဆက်သွယ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဆိုလို့ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ဘုံကျောင်းရှင်း အဖွဲ့ပဲရှိတယ်နော်။ ဘုံကျောင်းရှင်းဆိုတာ ရှိသမျှဟာ ထုတ်ရောင်းတာကိုပြောတာ။ :d:d:d
ကျနော်ရေးတာအားလုံး အလွတ်ကြီးပဲနော်။ ပြည်မကြီးအကြောင်းပဲရေးတာ။